Waxa lagu booqanayo Toledo | Wararka Safarka
Maxaa lagu booqanayaa Toledo
Maria | | Magaalooyinka Spain, Toledo
Toledo waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan uguna wanaagsan ee la ilaaliyo ee qarniyadii dhexe ee Yurub. Waxaa lagu naanaysaa 'magaalada saddexda dhaqan' sababtoo ah wada noolaanshaha qarnigaas jiray ee u dhexeeya Masiixiyiinta, Yuhuudda iyo Carabta, waxaa soo ifbaxay hanti weyn oo taariikhi ah oo sannad walba soo jiidata kumanaan dalxiisayaal ah oo ka kala imanaya gees kasta.
Dhaxalka faneed ee taariikhiga ah ee lagu arkay Toledo wuxuu u rogay caasimaddii hore ee Isbaanish matxaf hawada u furan, UNESCO ayaa ku dhawaaqday inay tahay Goob Dhaxal Adduun. Nagala soo qaybgal safarkan dib wakhtiga si loo ogaado waxa lagu arko mid ka mid ah magaalooyinka ugu soo jiidashada badan koonfurta Yurub.
1 Kaniisadda Santa Maria
2 Monastery ee San Juan de los Reyes
3 Alcazar ee Toledo
4 Saint Mary White
5 Buundada Alcantara
6 Fagaaraha Zocodover
7 Kaniisada Santo Tomé
Kaniisadda Santa Maria
Waa sheeko-yaqaan Spanish Gothic iyo mid ka mid ah meelaha lagama maarmaanka u ah booqashada Toledo. Dusha sare waa mid qurux badan waxaana lagu gartaa iyadoo leh saddex waji: midka ugu weyn (si qurux badan loo qurxiyay halka ay taajir sare ka tahay 92-mitir taagan), Puerta del Reloj (facade ugu da'da weyn) iyo Puerta de los Leones (kii ugu dambeeyay ee la dhiso ).
Si aad u aragto gudaha waxaa lagama maarmaan ah inaad iibsato tigidh. Waxa ugu fiican ee lagugula talin karaa waa inaad iibsato midka dhameystiran maadaama ay kuu saamaxeyso inaad booqato kabadhada oo aad fuusho munaaradda, halkaas oo ay ka jiraan aragtiyo wanaagsan oo magaalada ah. Waxyaalahan oo dhan waa inaan ku darnaa inaad awood u yeelan doonto inaad aragto meesha quruxda badan ee quruxda badan, guriga cutubka, daaqadaha muraayadaha muraayadaha leh, kaniisadda Mozarabic, khasnadda, aagga madxafka ee leh maslaxadda iyo New Kings Chapel halkaasoo ay ku hadheen boqorrada magaalada ayaa nasta. Boqortooyada Trastamara.
Monastery ee San Juan de los Reyes
Kaniisadda San Juan de los Reyes waxaa lagu dhisay codsi ka yimid Boqortooyada Katooliga ee 1476 waxaana loo tixgeliyaa tusaalaha ugu fiican ee qaabka Elizabethan Gothic. Muuqaalka woqooyi waa qurux badan yahay laakiin kan ugu fiican ayaa ku jira gudaha: labadiisa sheeko oo laba-sheeko ka kooban oo ay ka buuxaan farshaxanno iyo walxaha qurxinta ee isku dhafan qaababka Gothic iyo Mudejar. Dabaqa sare, xusid gaar ah wuxuu uqalmaa saqafka quruxsan ee dusha sare leh oo horeyba kaniisadda gudaheeda dusha sare ee iskutallaabta ee Cross Cross.
Alcazar ee Toledo
Qaybta ugu sareysa magaalada, dhisme wuxuu ku taagan yahay aragti kasta oo muuqaal ah oo Toledo ah: Alcázar. Waxaa la rumeysan yahay in meeshan ay jireen noocyo kala duwan oo qalcado ah tan iyo wakhtiyadii Roomaanka oo la siiyay aragti wanaagsan oo ah dhulka qofku ka leeyahay meeshan.
Markii dambe, Emperor Carlos V iyo wiilkiisa Felipe II waxay dib u soo celiyeen sanadihii 1540. Xaqiiqdii, guuleyste Hernán Cortés wuxuu Carlos I ku qaabilay Alcázar ka dib markii ay ka adkaadeen boqortooyadii Aztec. Qarniyo kadib, intii lagu gudajiray Dagaalkii Sokeeye ee Isbaanishka, Alcázar ee Toledo gebi ahaanba waa la baabi'iyay waana qasab in markale la dhiso. Waqtigaan la joogo waa xarunta Madxafka Ciidanka si aad u aragto gudaha waa inaad iibsataa tigidh.
Si kastaba ha noqotee, galitaanka maktabadda Castilla-La Mancha, dabaqa sare ee Alcázar ee Toledo, waa bilaash oo wuxuu leeyahay aragtiyo cajaa'ib leh oo ku saabsan magaalada.
Saint Mary White
Qeybtii hore ee Yuhuudda ee Toledo waa maxay macbudka loo rogay kaniisad leh magaca Santa María la Blanca. Waa dhisme Mudejar ah oo loo dhisay 1180 cibaadada Yuhuudda oo u taagan bannaanka kacsan marka la barbar dhigo gudaha gudaha quruxda badan ee fardo fardo, tiirar octagonal iyo derbiyo cad.
Sunagog kale oo mudan in la booqdo waa kaniisada XNUMXaad ee Tránsito, oo ku taal madxafka Sephardic gudaha oo leh saqaf sare oo alwaax ah oo la daboolay oo mudan in la arko.
Habka ugu caansan ee loo maro magaalada darbi jiifka ah ee Toledo haddii aad bas ama tareen ku timaado waa inaad ka gudubto buundada Roman ee Alcántara. Waxaa laga dhisay webiga Tagus sanadkii 98 miilaadiga oo dhererkiisuna yahay ku dhowaad 200 mitir, dhererkiisuna yahay 58 mitir Xarunteeda dhexe waxay u heellan tahay boqorka Trajan iyo dadyowga ku xeeran ee iska kaashaday dhismihiisa.
Haddii aad jeceshahay buundooyinka Toledo, waa inaad sidoo kale ogaataa buundada San Martín waqtiyadii dhexe, oo sidoo kale ka gudubta webiga Tagus laakiin ku taal dhinaca kale ee magaalada.
Plaza de Zocodover, xarunta neerfaha iyo fagaaraha weyn ee qarniyo badan, waa mid ka mid ah meelaha ugu jawiga badan ee lagu arko Toledo. Waa barxad faseexad leh oo ay ku wareegsan yihiin dhismayaal dhismeedka Castilian halkaasoo suuqyadii hore, dibiyada, dhoolatusyada lagu qaban jiray ... Maanta dad badan oo reer Toledo ah ayaa aadaya xarunta taariikhiga ah si ay socod raaxo leh ugu dhex maraan fagaaraha ama ay ugu cabbaan hal dhulkeeda. Intaa waxaa dheer, halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah dukaamada iibiya marzipan-ka ugu fiican Castilla-La Mancha. Kama bixi kartid adoon isku dayin!
Kaniisada Santo Tomé
Kaniisadani waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu caansan El Greco: "Aaska Tirinta Orgaz." Si aad u aragto waa inaad bixisaa tigidh si aad u gasho gudaha. Sawir gacmeedkan waxaa lagu sharfay ninkan sharafta leh oo ahaa samafalaha muhiimka ah ee Toledo isla markaana u istaagay waxqabadyadiisa sadaqo, isagoo gacan ka gaystay dib u dhiska kaniisadaha kaniisadda sidan oo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Toledo » Maxaa lagu booqanayaa Toledo